कर्णाली कचहरी – Tannerivoice
कर्णाली प्रदेशको धरातलमा रहेर बौद्धिक बहस गर्ने कर्णाली उत्सवको तेस्रो श्रृंखला आगामी फागुन १७ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेशकाे राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा फागुन १७, १८ र १९ गते कर्णाली उत्सवकाे आयाेजना हुने आयोजक ऋति फाउण्डेसनले जनाएको छ । कर्णालीको बहुआयामिक विषयमा गन्थन, मन्थन र चिन्तन गर्ने साझा थलोका रुपमा स्थापित कर्णाली उत्सवमा कर्णालीकै खस भाषालाई प्राथमिकता दिइन्छ । स
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट आगामी असार १ गते ल्याउँदै छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नागरिक स्तरबाट सुझाव दिनका लागि कर्णाली प्रदेशमा जबाफदेहिता खोजिरहेको युवाहरूको साझा मञ्च तन्नेरी चासो सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशको थिंक ट्याङ्क ऋति फाउण्डेशनसँगको सहकार्यमा हामीले ‘भ्वाइसेस फर बजेट’ स्तम्भ सुरु गरेका छौँ । यो स्तम्भको आठौँ श्रृंखला हो ।
संस्कृति, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा प्रदेशको आगामी बजेट कस्तो चाहन्छन् सरोकारवाला ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट आगामी असार १ गते ल्याउँदै छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नागरिक स्तरबाट सुझाव दिनका लागि कर्णाली प्रदेशमा जबाफदेहिता खोजिरहेको युवाहरूको साझा मञ्च तन्नेरी चासो सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशको थिंक ट्याङ्क ऋति फाउण्डेशनसँगको सहकार्यमा हामीले ‘भ्वाइसेस फर बजेट’ स्तम्भ सुरु गरेका छौँ । यो स्तम्भको सातौँ श्रृंखला हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट आगामी असार १ गते ल्याउँदै छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नागरिक स्तरबाट सुझाव दिनका लागि कर्णाली प्रदेशमा जबाफदेहिता खोजिरहेको युवाहरूको साझा मञ्च तन्नेरी चासो सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशको थिंक ट्याङ्क ऋति फाउण्डेशनसँगको सहकार्यमा हामीले ‘भ्वाइसेस फर बजेट’ स्तम्भ सुरु गरेका छौँ । यो स्तम्भको छैटौं श्रृंखला हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट आगामी असार १ गते ल्याउँदै छ । विगतदेखि नै शैक्षिक क्षेत्रमा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश हाल कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण अझै कमजोर बनेको छ । निषेधाज्ञा लकडाउनको अवधिमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर बाहेक कर्णाली प्रदेशका अन्य भूभागहरूमा अनलाइन कक्षा समेत सञ्चालन हुन सकेनन् । यसको मुख्य समस्या थियो विद्यालय तथ
विकासका विभिन्न सूचकहरूमा पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशको एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या बेरोजगारी हो। यकिन तथ्याङ्क नभएपनि कर्णाली प्रदेशका लाखौँ युवाहरू भारतलगायतका विदेशका विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गर्छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण गत वर्षदेखि विदेशका विभिन्न मुलुकमा रोजगारी गुमाएर कर्णाली प्रदेशमा फर्किनेहरूको सङ्ख्या करिब ५० हजारभन्दा बढी
‘पर्यटनमा पुर्वाधार विकास जरुरी, हाेमस्टेलाइ प्राथमिकता दिउँ’
कर्णाली प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट ल्याउँदैछ । विकासका सबैजसो सुचकहरुमा पछाडी रहेको प्रदेशको विकासका लागि कोरोना महामारीले अँझै चुनौती थपिदिएको छ । कोरोना महामारीका कारण कर्णाली प्रदेशमा अन्य क्षेत्रमा जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर पर्यो ।कर्णाली पर्यटनमार्फत समृद्धीको सम्भावना रहेकाे प्रदेश हाे । हामिले प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक व
कर्णाली प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट ल्याउँदैछ । विकासका सबैजसो सुचकहरुमा पछाडी रहेको प्रदेशको विकासका लागि कोरोना महामारीले अँझै चुनौती थपिदिएको छ । कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा अघिल्लो वर्ष करिब चार महिनाभन्दा बढि र यस वर्ष पनि एक महिनाभन्दा बढि समय उद्योग व्यवसायहरु पुर्ण रुपमा बन्द रहे । जसले गर्दा निजि क्षेत्रले प्रवाह गर्ने राेजगारीमा समे
भ्वाइसेस फर बजेट: कर्णालीमा स्वास्थ्यको लागि कस्तो बजेट आउनुपर्छ ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट ल्याउँदैछ । विकासका विभन्न सुचकहरुमा अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा सबैभन्दा पछाडी रहेको कर्णाली प्रदेश कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो दुबै लहरबाट टाढा रहन सकेन। विकासका सबैजसो सुचकहरुमा पछाडी रहेको प्रदेशको विकासका लागि कोरोना महामारीले अँझै चुनौती थपिदिएको छ । यसर्थ चालु अर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीको पहिलो लहर